Par Taratra sur 08/08/2020
Efa mifampiresaka ankehitriny ny zandary ao Itaosy sy ny zandariamaria ao Tsiroamandidy mahakasika ilay tranga nahazo an-dRazanajafy Miharisoa Princia, 10 taona, taona fahadimy. Ankizivavikely very sy nisy naka an-keriny ny talata teo tao Tsiroamandidy. Ankehitriny, avotra soa aman-tsara izy ary efa misy mandray an-tanana ny fikarakarana azy.
Raha ny fitantaran’i Princia tamin’ny antso an-telefonina nifanaovanay taminy, nilalao teo an-tokotanin’ny trano fonenany ao Betsifasika Tsiroamandidy izy ny talata teo. Taorian’izay, nisy fiara 4×4 nitondra azy ka nofatorana ny tanany sy ny tongony ary notampenana ihany koa ny masony.
Vosambotry ny polisy, omaly, ary nanaovana fanadihadiana ny vehivavy iray, voarohirohy amin’ny fanariana zazamenavava tao anaty lavapiringa eny Anosizato Atsinanana. Hitan’ny fokonolona, omaly maraina manodidina ny tamin’ny 9 ora, ny fatin’ilay zazakely teny amin’ny faritra fahatelo Anosizato Atsinanana, nandritra ny fandoarany ny lavapiringa. «Efa tsy nisy aina intsony ilay zazalahikely. Nitranga ihany koa ny lelany», hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray.